नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : हाम्रो नयाँ नेपालमा आजकल यस्तो पनि हुन्छ ! : ठेक्काको कमिसन माग्दै काभ्रेका एक युवाले आफ्नै भिनाजुको अपहरण गरे
हाम्रो नयाँ नेपालमा आजकल यस्तो पनि हुन्छ ! : ठेक्काको कमिसन माग्दै काभ्रेका एक युवाले आफ्नै भिनाजुको अपहरण गरे
ठेक्काको कमिसन माग्दै काभ्रेका एक युवाले आफ्नै भिनाजुको अपहरण गरेका छन् । आफूले माग गरेबमोजिम ठेक्काको १० प्रतिशत रकम कमिशन नदिएपछि काभ्रेको सानो वाङथली गाविसका २६ वर्षीय नवराज पराजुलीले आफ्नै भिनाजु अनिरुद्र गौतमको अपहरण गरेका हुन् । पराजुलीले मंगलबार साँझ ९ लाख ३० हजार रकम माग गर्दै काभ्रेको धुसेनी शिवालय ८ बाट भिनाजु दीपक भनिने अनिरुद्रलाई अपहरण गरेका हुन् । अपहरण गरेर दोलालघाटतर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेपछि सालाले भिनाजुको अपहरण गरेको तथ्य खुलेको हो । प्रहरीले गौतमलाई अपहरण गर्नमा संलग्न साला पराजुली सँगै ६ युवालाई पक्रेको प्रहरीले जनाएको छ । अपहृत गौतम सकुसल मुक्त भएका छन् ।
बिशेष प्रतिनिधि (रिपोर्टर) को आवश्यकता !
छोटै समयमा विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीका बिच लोकप्रिय बन्न सफल अमेरिकाबाट प्रकासित, Nepali community based www.NepalMother.com लाई हामी अन्तरराष्ट्रिय स्तरको News, Views, Entertainment Website का रुपमा बिकास गर्दै गैरहेका छौं , बिभिन्न देश तथा अमेरिकाका बिभिन्न स्टेट तथा शहरहरुमा नेपाल मदर डट कम का लागि बिशेष प्रतिनिधि (रिपोर्टर) हरुको आवश्यकता छ । आफ्नो बायोडाटा र एक प्रती फोटो सहित ईमेल info@nepalmother.com मा आबेदन पठाउनुहोला । समाचार लेख्न जान्ने, नेपाली टाइप गर्न जान्ने, फोटो र भिडियोको समेत नलेज भएकालाई बिशेष प्राथमिकता । हाललाई बिशेष प्रतिनिधि (रिपोर्टर) हरुले Volunteer का रुपमा सेवा गर्नु पर्नेछ । हामी तपाईंलाई पैसा दिन सक्दैनौ तर सम्मान र इज्यत अबस्य दिन्छौं, र हामी पनि नेपाल र नेपालीका लागि, Nepali Community का लागि निशुल्क काम गर्छौँ । - Editor in Chief, www.Nepalmother.com and www.Nispakshya.com
Posted by www.Nepalmother.com at 10:04 AM